Iphupha ngeCatchy Melody ▷ ➡️ Discover Online Online ➡️
Ixesha ledinga elingagqibekanga el mundo Yazi le meko: Uva ingoma enengoma enomtsalane kunomathotholo kwaye kwakamsinya nje emva kokuba uzifumanise ungqumshela okanye ucula le ngoma ngokwakho.
Ngokusisiseko, le ayisiyonto ingaqhelekanga nokuba. Ngexesha elithile, nangona kunjalo, uyaqonda ukuba unengoma yale ngoma entlokweni yakho ngalo lonke ixesha, ucula kunye namazwi kwiluphu, kwaye le ngoma ibambekile kwimemori yethu. Esi siqwenga somculo singena ezindlebeni zethu ngokungathi ngumbungu kwaye sineenkani sibambeke apho. Kungenxa yoko le nto iingoma ekunzima ukuba zisuswe entlokweni zinikwa igama elithi "ingoma emnandi." Ngokungafaniyo ne-earwig, i-earwig ke ayisosidalwa sokwenyani sehlabathi lezilwanyana.
Ukuba siyakhumbula ukuba ephupheni ingoma ethile ebambekayo ingene entlokweni yethu, oku kunokuba nezizathu ezahlukeneyo.
1 Uphawu lwephupha «uncuthu lwengoma» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uncuthu lwengoma» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uncuthu lwengoma» - ukutolikwa ngokubanzi
Ingoma emnandi esiyivayo kwilizwe lethu lamaphupha inokusibonisa ngokwembono yabatoliki bamaphupha ukuba sijongana nesifundo esithile kwilizwe lokwenyani. Lume unayo. Ukuba sikhathazwa yinto engapheliyo entlokweni yethu kwimeko yamaphupha, oku kubonisa ukuba kunzima kangakanani kuthi ukugxila kwiingcinga zethu kwezinye izinto.
Ngamanye amaxesha ikwayingoma edlamkileyo nenomdla esiyibonayo emaphupheni. I-pince-nez encinci isencwadini yamaphupha njengoko uphawu lwesilumkiso Ndiyaqonda. Umntu uya kuba wenza kakuhle ukuba angakhohliseki kakhulu. Thintela amarhe kunye namaqhinga abanye abantu abasasaza kangangoko kunokwenzeka. Ngaphandle koko, ubeka emngciphekweni wokubanjwa yinto ekunzima kakhulu ukuphuma kuyo.
Inokuba ingabanye abantu abavakala njengeendlebe ephupheni. Wayenokubonakala egubungele iindlebe zakhe ukuphepha isandi esiphindaphindayo. Kwitoliki ngokubanzi yamaphupha, umntu ophuphayo unokufumana amava anjalo. ingxaki bhengeza, apho kuya kufuneka ujongane nabachasi abaninzi. Bazama kananjalo ngeendlela zonke ukukuqinisekisa ngento ephikisana ngokupheleleyo nezimvo nezimvo zabo.
Uphawu lwephupha «uncuthu lwengoma» - ukutolikwa kwengqondo
Umfanekiso wephupha «uncuthu lwengoma» ungathanda ukukhumbula iphupha kwindawo ethile yengqondo, kuye amaxabiso abalulekileyo ukunyamezela. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlale uvulekile kwaye ungagwebi okanye ugwebe abanye abantu ngezimvo zabo ezahlukeneyo.
Icala leemvakalelo linokubaluleka kwihlabathi lamaphupha. Ke kunokwenzeka ukuba uzive ukhululeke kakhulu ngengoma enomtsalane entlokweni yakho. Ngaphandle kwengcinga eninzi, ibaleka ingayeki ngaphakathi ngaphakathi kwaye siyabona nasemaphupheni ukuba kumnandi kangakanani ukungacingi nto, kuba ingoma iqala kwakhona kwaye akukho ndawo yeengcinga ezingaphezulu. . Kungenzeka ukuba umntu ochaphazelekayo afane ngokwenyani kwaye uqhuba rhoqo izinto ezingabalulekanga de.
Cinga ngendawo apho ungathanda ukubeka khona izinto kwisitovu esingasemva okanye unethemba lokuba izinto ezingathandekiyo ziya kuzikhathalela xa uzivumela ukuba zihlale ixesha elaneleyo.
Kumbono wokomoya wokuchazwa kwephupha, uncuthu lwengoma olunomtsalane luphawu njenge umqobo qonda. Oku kuthintela ukukhula kwengqondo kunye nokomoya. Oku kuyaqhubeka ukubonakala njengengoma ethandabuzekayo kwaye iphazamisa abo bachaphazelekayo emsebenzini obalulekileyo kwinkqubo yophuhliso olungaphaya.